Filed under: ဆောင်းပါး — 25 Comments
>အင်း ဟုတ်တယ်..ကာရံလည်း မြန်မာဆိုပြီး အထင်သေးမခံချင်ဘူး..အဲ့လိုမျိုး ပြောထားတာ ကောင်းတယ်..အားပေး ထောက်ခံသွားပါတယ် ကိုချမ်းလင်းနေရေ..ရွှေကွ..
>အဲ ၁ ရော ၂ရော ရတယ်..
>၃လည်း ရဦးမလား မသိဘူး..
>အနန္တော အနန္တ ငါးပါး ဦးထိပ်ထားလို့ ..၅
>တော်ပြီ နောက်လူတွေ တောက်ခေါက်နေဦးမယ်…ခြောက်ထိပေါ့..:P
>အဲ မေ့သွားလို့ ..ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးကို တစ်ဝကြီး ဖူးသွားတယ်နော်..အရမ်း သပ္ပာယ်တာပဲ…
>လာလည်ပါတယ်..နော်ရွှေတိဂုံဘုရားပုံတင်ထားတာကျေးဇူးပါ ဖူးမျှော်လိုက်ရလို့အပေါ်က ကာရံဆူးတော်တော်ဆိုးပါ့..နော် ၇ ထိအောင်သူချည်းပဲ
>အကိုရေ ရွှေတိဂုံဘုရားကို တဝကြီးဖူးသွားပါတယ်အကိုရေမြန်မာဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် မြန်မာပါပဲ ရွှေမြန်မာတွေပေါ့ 🙂
>ဟုတ်တယ်အကိုရေ။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးကို မသိတာ မဟုတ်ဘူး။ သက်သက်မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နှိမ်တာ။ ဘယ်သမိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့် ရွှေရောင်တောက်နေတာကို မနာလိုလို့ပြောတာလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ။
>ဘယ်ရမလဲ..၁ ၁ နောက်တစ်ခါ ပြန်ယူသွားတယ်.. မချစ်ရတော့ တင်းနေပြီလားမသိ..:P
>ဒေါ်ကာရံ အတော် သောင်းကျန်းနေပါလားဟင်။တိန် တိန် တိန်။။။ ဟိဟိကိုချမ်းရေ…ဟုတ်ပါ့နော်။ မြန်မာ (ဘားမား)ရှင်းလိုက်ရတာ အကြိမ်ကြိမ် စိတ်တောင် ရှည်နေပြီ။ ဟိဟိပိန်းကြတယ်နော်။
>မှန်ဧ။် မှန်ပါဧ။်… ဘုရားပုံတော်က အရမ်းကို ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်
>သူများ တစ်ခါတစ်လေ ၁ ယူတာကို နာလိုကြဘူး…ကရော် ကရော်..
>ဟဲဟဲ အဲဒီအကြောင်းဆိုရင် ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ကုလားက မေးတယ် အစ်ကိုလို့ခေါ်ရင်ဘယ်လိုပြောရလဲတဲ့ ငါ့နှမလင် လို့သင်ပေးလိုက်ရောကုလားခေါ်နေတာ အခုထိပဲဗျို့လူကြားထဲလဲ ငါ့နှမလင် တဲ့ဗျာ သူမြန်မာစကားတတ်တယ်ဆိုတာကြွားချင်သေးတယ် ကြားတဲ့ဗမာတွေကတော့ပြုံးစိစိပေါ့ဗျား)
>oh!! I see , that's why shwe !!! ဟဲဟဲ…ဟုတ်တယ်နော်…
>ကိုရေချမ်းရေ ဟိဟိ ရီရတယ်နော် ဒီမှာ ဒီလိုပဲ ဘယ်ကလဲ ဆိုရင် ဘားမား ဆို သိဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ near Thailand and China ဆိုမှ အိုးးးးး သိပြီ သိပြီဖြစ်နေတာ သူတို့သိတာ တရုတ်နဲ့ ယိုးဒယားသိတာလေ မြန်မာကိုသိတာဟုတ်ဘူးရယ် သိပ်မျက်နှာငယ်တာပဲသိလား ညီမကို ဆိုသိပ်မေးတယ် ယိုးဒယားကလား ဖလစ်ပိုင်ကလားနဲ့ ဟုတ်ဘူး မြန်မာကဆို သိတော့ဘူး သိလား သိပ်အသည်းနာတာပဲ တော်ပြီ ပြောတော့ဘူးတာ့တာ ဘိုင်
>ဟုတ်ပါ့ခင်ဗျာ..တစ်ချိန်တုန်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံကတောင် အတုယူရတယ်ဆိုပဲကြားဖူးတာနော်….အဲ့ဒါ..အဲ့ဒါ…အဲ့ဒါ ဘ၀သံသရာပေါ့နော…ခုများတော့ …ပြောချင်ဘူးပျော်ပါစေ
>အိုး အိုင်စီး ကိုချမ်းလင်းနေ.. ဟဲဟဲ… ကောင်းတယ် အဲ့လိုလေး ပြောပေးထားမှ
>တချို့နိင်ငံတွေက မြန်မာနိင်ငံကို သေသေချာချာ မသိပေမယ့် အမေစုကိုတော့ သိကြတယ်…။ဒီနိင်ငံမှာ အမေစု ပုံတွေ ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တောင် ရှိတယ် ။
>လူလည်ကလည်း ကျတတ်ပါပေ့ ကိုချမ်းရယ်…း)တော်သေးတာပေါ့ ရွှေဆိုပြီး "ငရွှေ့" ပုံကိုထုတ်မပြလို့… အဲဒါဆို ဒီငနဲ တခါထဲ ထိုးအန်သွားအုန်းမယ်…းဝ)
>ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကိုတွေ့လိုက်တိုင်း သတိရမိတယ်၊ ကျမလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားကို တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်။